Soomaaliya oo laga hirgaliyey nidaamka asxaabta
posted on Sunday, December 3rd, 17
Muqdisho (RH) Magaalada Muqdisho waxa maanta oo Axad ah si rasmi ah looga furay diiwangalinta xisbiyada, waana markii ugu horreysay ku dhawaad 50 sanno.
Guddoomiyaha Guddiga doorashada madaxabannaan ee Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey) oo ka hadashay bandhig lagu qabtay Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho isla markaanna ay ka soo qeybgaleen siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshadda,ayaa sheegtay in ilaa hadda ay hayaan codsiyada toddobo Xisbi oo u diyaarsan hannaanka Xisbiyada Siyaasadeed ee Soomaaliya.
Waxa ay sheegtay in Sharuudaha laga rabo Xisbiga ay ka mid yihiin in uu leeyahay dastuur,Gole dhexe, gole fulin sidoo kalena iska bixiyo lacagta diiwaangelinta oo gaareysa $500 oo doollarka Mareykanka ah.
Xaliimo Yareey ayaa sidoo kale tilmaamtay in ay muhiim tahay In xisbiga xaruntiisa dhexe ay noqoto Magaalada Muqdisho, islamarkaana uu laamo ku leeyahay Guud gobollada Soomaaliya.
Xaflad lagu qabtay Hotelka SYL oo ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyah baarlamanka, guddoomiye ku xigeenka aqalka iyo ra’iisal wasaare ku xigeenka ayaa lagu soo bandhigay shuruudaha laga rabo xisbiyada.
Illaah siddeed xisbi-siyaasadeed ayaa si ku-meel-gaar ah loo diiwaangaliyay sida uu sheegay guddiga doorashooyinka qaranka.
Shuruudaha hadda ku xiran in xisbi si ku-meel-gaar ah loo diiwaangaliyo waxaa ka mid ah:
-In la soo qorto codsi shaabbadda xisbiga ay ku dheggan tahay, isla markaana la raaciyo nuqul ka mid ah kulankii ugu horeeyay ee xisbiga.
-In la soo raaciyo xeerka xisbiga iyo habka ay ku xalinayaan haddii dhexdooda uu khilaaf ka yimaado.
-Bixinta lacagta diiwaangalinta oo ah $500.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in xukuumadiisa ay diiradda saari doonto sidii dalka looga hirgalin lahaa nidaamka axsaabta badan si looga gudbo hannaanka hadda wax lagu soo doorto oo ah 4.5.
Nidaamka axsaabta ayaa suurtagalinaya in xildhibaannada baarlamaanka iyo xubnaha kale ee dowladda ay ka yimaadaan xisbiyo halka hadda ay keenaan odayaasha qabaa’ilka Soomaaliyeed.
Xildhibaannada golaha shacabka Soomaaliya ayaa sannadkii 2016kii meel mariyay sharciyada axsaabta dalka,waxaana xisbiyada lagu soo rogay shuruudo uu xisbiga ku noqon karo xisbi la aqbalo.
Dadka odorosa arrimahan ayaa sheegaya in xilligan aysan suurtagal ahayn in nidaam Axsaan dalka laga furo waayo dowladda gacanta kuma heyso guud ahaan dalka oo dhan oo qeybo badan Shabaab ayaa maamula.